Isniin, Nov 23, 2020-Cabdi Xaanshi ” Madaxweyne Farmaajo wuxuu jabiyay qoddobo sharci ah – LaacibOnline
Isniin, Nov 23, 2020-Cabdi Xaanshi ” Madaxweyne Farmaajo wuxuu jabiyay qoddobo sharci ah
Isniin, November, 23, 2020 (HOL) – Guddoomiyaha Aqalka Sare Soomaaliya Cabdi Xaanshi Cabdullaahi oo la hadlayay laanta Afka Soomaaliga ee VOA ayaa ku eedeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajo in uu jabiyay qoddobo sharci ah.
Cabdi Xaanshi ayaa sheegay in madaxweyne uu si sharci darro ah markii horeba ku riday xukuumaddii uu hoggaaminayay Xassan Cali Kheyre, taa badalkeedana uu xilka Ra’iisal Wasaaraha si KMG ugu dhiibay xiliggaa Ra’iisal Wasaare ku-xigeenka oo ka mid ahaa xukuumadda codka kalsoonida lagala noqday.
”Qaladaadka sharciga ee uu madaxweynuhu horey u sameeyay ayeey ka mid tahay, waxey aheyd haddiiba xukuumadda si KMG loo sii waddayo in uu xilka sii hayo Kheyre inta Ra’iisal Wasaare laga soo magacaabayo” ayuu yiri Cabdi Xaanshi Cabdullaahi.
Gaar ahaan wuxuu sheegay in la maja-xaabinayo doorashooyinka Xildhibaannada labada Aqal ee ka soo jeeda Gobolada Waqooyi [Soomaalilland]” Guddiyada doorashada gobollada Waqooyi kama duwana kuwa ay soo magacaabayaan dowlad gobolleedyada” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Cabdi Xaanshi Cabdullaahi.
← Driving a school bus instead of an armed pickup truck
Ethiopia warns civilians of ‘no mercy’ in Tigray offensive →
Khamiis, Jan 14, 2021-Kongreska Mareykanka oo intiisa badan isku raacay soo jeedinta ah xilka qaadista Donald Trump
Axad, July 5 , 2020-Al-shabaab oo sheegtay iney dileen xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Hirshabeelle oo saaka lagu qafaashay waddada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar